चितवन र नवलपरासीमा बाढीको बितण्डा, माडीका बाढीपीडित भन्छन्,‘रुख चढेर १४ जना जोगियौं’ | चितवन पोष्ट
गृह » चितवन र नवलपरासीमा बाढीको बितण्डा, माडीका बाढीपीडित भन्छन्,‘रुख चढेर १४ जना जोगियौं’
माडी । खान खाएर सक्दा नसकिँदै शुक्रबार साँझपखबाटै पानी पर्न सुरू भएको थियो । रात छिप्पिँदै जाँदा झनै दर्कियो । आडैमा चितई खोलामा आएको बाढीको आवाज ठूलो ठूलो हुँदै गयो । पाँच महिनाको छोरा काखमा लिएर ओछ्यानमा पल्टेकी सविता परियार निदाउन सकेकी थिइनन् । ‘लो भागौं भागौं’ छिमेकमा रहेका आफन्तको यो आवाजले उनी नराम्ररी झस्किन् ।काखमा पाँच महिनाको छोरासँगै अर्को तीन वर्षको छोरा पनि थियो । घरको आँटीमा रहेको लिस्नोबाट ओर्लन नभ्याउँदै उनको खुट्टाले पानी छोयो । आडको घर मामाको थियो । मामाले सहयोग गरेर बल्लबल्ल उनी घर बाहिर निस्किन सकिन् । निस्केर कहाँ जाने । जताततै पानी नै पानी थियो । सय मिटर पर रहेको चितई खोलाको सबै पानी फर्केर घर तिर आएझै लाग्यो उनलाई ।पानीको बेग बलियो हुँदै गयो । ‘लौ छोरा र मेरो काल आएछ’ भन्ने उनलाई लाग्यो । तर, आडैमा ठूलो पिपलको रुख थियो । माडी नगरपालिका वडा नं. २ ढिकुन भैरबपुरकी सवितासहित वरपरका तीन घरका चौधजना त्यही रुखमा चढे । पानी कम हुँदै जाँदा मध्यरातपछि पल्लो गाउँका मान्छेहरु आएर उनीहरुको उद्धार गरे । घर नजिकै रुख नभएको भए सायदै उनीहरु जोगिने थिएनन् ।सविताको घरको आडमा मामा भीमबहादुर परियारको घर छ । श्रीमान श्रीमतीसहित भीमबहादुरका छ वर्ष र १५ वर्षका दुई छोराछोरी छन् । नजिकै सोममाया परियारको घर छ । सोममायाका ४ वर्ष, ६ वर्ष, ८ वर्ष र ११ वर्षका चारजना छोराछोरी छन् । सवितासँगै उनका वृद्धवृद्धा बा आमा पनि बस्छन् । हिजो साँझ सोममायाका श्रीमान घरमा थिएनन् । आठ केटाकेटीसहित १४ जनाले रुखमा चढेर ज्यान जोगाए ।
‘मेरो श्रीमान दुर्घटनामा परेर दुवै खुट्टा नचल्ने हुनु भएको छ । अहिले उहाँ उपचारका लागि काठमाडौंमा हुनु हुन्छ । हिजो उहाँ यहाँ भएको भए कसले बोकेर रुख चढाउने, खै उहाँलाई कसरी जोगाउन सकिन्थ्यो होला र’ सोममायाले भनिन् । रातिको घटना सम्झदा पनि सोममायाको होस हवासै उड्छ । रुखमा चढे पनि बाँचौला भन्ने लागेको थिएन भन्छिन् उनी ।
‘काखमा केटाकेटी समाएर बसेको छ । यसो तल हेर्दा पानी नै पानी छ । बाढीको आवाज उस्तै छ । अझ भयङ्कर आवाजका साथ चट्याङ पर्छ । रुखमा छौं, लौ यही चट्याङ पर्ने भयो क्या हो भन्ने लाग्यो’ सोममायाले हक्कानिँदै रातिको अवस्था सुनाइन् । पानीमा भिजेर केटाकेटी मात्रै हो र ठूला मान्छे थरथर काँप्न लागेका थिए । ज्यान जोगिएला भन्ने आशा नै हराएको थियो भन्छिन् उनी ।
विस्तारै पानी कम हुँदै गएपछि पल्लो गाउँमा टर्च बाल्दै हिँडेका मान्छेहरु देखिए । टर्च नजिक नजिक हुँदै जब खोलाको किनारमा आइ पुग्यो रुखमा रहेकाहरु जोड जोडले चिच्याए । ‘धन्न खोलामाथिको पुल केही भएको रहेनछ । हामी पुल तरेर रुखको आडमा गयौं’ उद्धार गरेका स्थानीय शिक्षक सूर्य भुषालले भने ।
उनीहरुले लगभग रातको चार घण्टा पानीमा भिज्दै रुखमा बसेका थिए । विद्यालयमा रेडक्रससँग आवद्ध भएका भुषाल उद्धार टोलीसहित गाउँगाउँ डुलेका थिए । नारायणी जस्ता ठूला नदी, राप्ती जस्ता मझौला नदी र रिउ जस्ता ठूला खहरे रहेका चितवनमा साना असंख्य खहरेले घेरिएको माडी बाढीबाट प्रभावित भएको छ । माडीमा बाढीले कुनै मानवीय क्षति त गरेको छैन तर जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ । चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टका अनुसार बाढीले १६ घरमा पूर्ण क्षति भएको छ । तीन सय घरपरिवार प्रभावित भएका छन् । पुलहरु भत्किएका कारण यातायात अवरुद्ध छ । पानी लगातार परेका कारण जोखिम कायमै छ । सावधानी अपनाउन स्थानीयलाई सजग बनाएको भट्टको भनाइ छ ।
शुक्रबार राति १० बजे आएको पानीका कारण मध्यरातमा ठूलो बाढी आएको माडी नगरपालिका वडा नं. १ वन कट्टाका यमबहादुर अधिकारीले बताए । माडीको वडा नं. २, ३ र ४ नम्बर वडामा क्षति भएको छ । चितई खोला र डांग्रे खोलामाथिको पुल भत्केका कारण ठोरी–माडी भरतपुर हुँदै देशका विभिन्न ठाउँमा जाने गाडीहरु सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।
भित्रि बाटोहरुमा समेत गरेर १० पुल भत्केको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टले जानकारी दिए । जोखिममा रहेका घरका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा राख्न थालिएको उनले बताए । नेपाली सेनाले उद्धार टोली राख्ने छ । चितवन निकुञ्जले उद्धारका लागि हात्तीको व्यवस्था गरेको छ । माडीमा रहेका १५ वटा माछा पोखरीहरुमा पनि असर परेको छ । माडी माछाको पकेट क्षेत्र पनि हो । माडी नगरपालिकाका मेयर ठाकुर ढकाल विवरण संकलन कायमै रहेका कारण क्षतिको अवस्था अझै बढ्न सक्ने बताउँछन् । प्रसारण लाइनमा समस्या आएका कारण माडीमा तीन हप्तादेखि बिजुली बत्ती बलेको छैन । टेलिफोन टावरले पनि काम गर्न छाडेका कारण आधा माडीमा मोबाइल सम्पर्क बन्द छ । खाने पानीको मुहानमा पनि क्षति पुगेको छ ।
राहतको व्यवस्था गर्न एमालेको माग दुई दिनदेखि परेको अविरल वर्षाको कारण माडी नगरपालिकामा आएको बाढीले ठूलो धनसम्पत्तिमा क्षति पुग्नुका साथै जनजीवन अत्यन्त कष्टकर भएको भन्दै नेकपा एमाले चितवनले तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
नेकपा एमाले चितवनले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बाढीबाट क्षति भएका घरहरुलाई तत्काल उचित क्षतिपूर्ति दिन, बाढीबाट प्रभावितहरुलाई आवश्यक राहतको व्यवस्था मिलाउन, भत्केका भौतिक संरचना पुनर्निर्माण कार्य तुरुन्त सञ्चालन गर्न र माडीमा विद्युत् लाइनको मर्मत गरी तत्काल विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकार समक्ष माग गरेको हो ।
माडी नगरपालिका भित्रका रिउ, चिताई, मगुइ, रौतनी, बाँदरमुढे, पतेरे, डयाङ्ग्रे, रिमाल खोला, घाँघरलगायतका खोलाहरुमा आएको बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएकोले एमालेले बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई आवश्यक सहयोग पु¥याउने कार्यमा तत्काल जुट्न पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन पनि गरेको छ ।